चाम्रा सरकारी अधिकारी | Bishow Nath Kharel
चाम्रा सरकारी अधिकारी
केही अपवादबाहेक नेपालका धेरै सरकारी अधिकारी सूचना दिन भनेपछि दाँतबाट पसिना नै चुहाउँछन्। दिइहाले पनि नाम उल्लेख गर्न तिनीहरू उत्पातै डराउँछन्। भाडाकी भारतीय आमा लिएर नेपाल छिरेका दुई इजरायली नागरकिका बारेमा थप पुष्टि हुने सूचना लिन म अध्यागमन विभाग पुगँे। त्यहाँका एक सरकारी अधिकारीले भाडाकी आमा (सरोगेट मदर) भनेको के हो र यो नेपालका निम्ति उपयुक्त छ कि छैन भन्ने नै बुझेनन्।
त्यही भएर मैले तीन वर्षअघि आफूले सरोगेसीकै विषयमा प्रकाशित गरेको रिपोर्टको फोटोकपी पनि लिएर गएको थिएँ। तर, अध्यागमनका ठूला सरकारी अधिकारीले ती इजरायली नागरकिका बारेमा पर्याप्त सूचना दिन आनाकानी नै गरे। मलाई ती इजरायली नागरकिले नेपाल प्रवेशका लागि कुन मितिमा प्रवेशाज्ञा लिए भन्ने जानकारी चाहिएको थियो, जसले उनी काठमाडौँमा कति दिन बसे भन्ने प्रमाणित गर्न मद्दत गथ्र्यो। तर, त्यति जानकारी दिन पनि उनले सकस माने। उनी कहिले त्यस्तो मिति खोज्नै नसकिने बताउँथे त कहिले उक्त मितिबारे आफूलाई जानकारी नहुने बताएर टार्न खोज्थे।
झन्डै आधा घन्टाको गलफतीमा पनि उनी टसको मस भएनन्। बरू आफूहरू सरोगेसीलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गररिहेको बताए। तर, उनले त्यस्तो छलफल कहाँ पुग्यो र कससँग भयो भन्ने बताउन भने फिटिक्कै चाहेनन्। त्यत्तिका चाम्रा सरकारी अधिकारी मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ। धन्य हुन्, ती सरकारी अधिकारी।
सरोगेसीको धन्दा नेपालभित्र कसरी चलिरहेको छ भन्ने रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि धेरै प्रतिक्रिया पाइयो। रिपोर्ट छापिएको दुई सातापछि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर शाखामा पुगेपछि थाहा भयो, त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले कानुनमा कुनै व्यवस्था नै नभएकाले सरोगेसीसम्बन्धी कुनै काम नगर्ने निर्णय गरेछन्। तर, सरकारी अधिकारीहरूको त्यस्तो निर्णयले भित्रभित्रै सरोगेसीको धन्दा चलाइरहेको बिचौलीयाहरूलाई पर्नु आपत् परेछ। त्यस्ता बिचौलियाहरू पनि चानचुने हुन् र ? नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसम्म रहेछन्।
कन्सुलर शाखाबाटै थाहा भयो, एक पूर्वसचिव त यही विषयमा बाटो खोल्न झन्डै आधा दर्जनपटक कन्सुलर शाखा धाइसकेछन्। उनले आफू पूर्वसचिव भएको ध्वाँस दिँदै त्यस्तो काम नगर्न अह्राएछन्। कुरो चिप्लँदै मुख्यसचिव लीलामणि पोखरेलकहाँ पुगेछ। तर, कानुनमा व्याख्या नभएको काम नगर्ने कन्सुलर शाखाको अडान कायमै रहेछ। पछि कुरोको चुरो बुझेपछि पो थाहा भयो, ती पूर्वसचिव त काठमाडौँको एक ठूलै निजी अस्पतालको सल्लाहकार पो रहेछन्।
कहिल्यै नउठ्ने फोन
नेपालका सरकारी कार्यालयको एउटा साझा विशेषता के छ भने अधिकांश फोन कहिल्यै उठदैनन्। अनुभव हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही संकायहरूमा विद्यार्थीभन्दा प्राध्यापकको संख्या धेरै रहेको विषयमा रिपोर्टिङ् गर्दाको। कीर्तिपुरस्थित त्रिविको सूचना शाखाबाट मैले विभिन्न संकायको टेलिफोन नम्बर रहेको डाइरेक्टरी हात पारेँ। तर, अचम्म ! डाइरेक्टरीमा भएका केही टेलिफोन नम्बर उठ्दै उठ्दैनथे। लगातार घन्टी जान्थ्यो तर फोन उठ्दैनथ्यो। झन्डै एक सातासम्म मैले ल्यान्डलाइन फोनमा प्रयास गररिहेँ। विद्यार्थीर्का निम्ति जाडो बिदा भए पनि विश्वविद्यालयका कर्मचारीलाई त्यस्तो बिदा उपलब्ध हुँदैन।
अधिकांश संकायमा विद्यार्थी नआउने भएपछि कर्मचारीहरू पनि कि त कार्यालय पुग्दै पुग्दैनन्, पुगिहाले पनि तिनीहरू घाम तापेर दिन बिताइदिन्छन्। आजित भएपछि मैले सम्बन्धित संकायका विभागीय प्रमुखको हातेफोनको नम्बर खोजेँ। नम्बर फेला पारेपछि मैले सरोकारवालाहरूसँग सोधेँ, “बिदा नभएका दिनमा पनि त्रिविका ती संकायमा फोन जाने तर नउठ्ने समस्या किन परेको होला ?” सबैको उत्तर एउटै हुन्थ्यो, “त्यस्तो त नहुनुपर्ने ? के भएछ बुझौँला।”
कहिले बन्ने बाटो ?
यो देशमा पटक-पटक सरकार बन्छ। त्यसपछि मात्रै अरू कुरा बन्छन्। पृथ्वी राजमार्गमा एक यात्रुले भनेको यही कुरा मनमा खेलिरहन्छ। खिलराज रेग्मीको सरकार हुँदा सुरु भएको पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको नागढुंगा सडक खण्डको बाटो मर्मत संविधानसभाको चुनाव सकिएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सुशील कोइराला आइपुग्दा पनि सकिएको छैन। नवलपरासीको मौलाकालिकादेखि देवघाटसम्म रेग्मी हेलिकप्टरमा उडे। त्यसैले उनलाई सडकको दुर्दशा थाहा हुने कुरै भएन । संविधानसभा निर्वाचनमा चितवन-४ मा मत माग्न जाँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री कोइराला पनि उडेरै पुगे। उनलाई सडकको बिजोग के थाहा ?
अहिलेका गृहमन्त्रीले काठमाडौँको नाकमुन्तिरको गाउँमा क्षेत्रीय अधिवेशनमा जाँदा पनि हेलिकप्टर नै चढे। त्यसैले उनलाई झन् यो समस्या थाहा हुने प्रश्नै भएन। हरेकपटक गृहजिल्ला चितवन झर्दा थानकोटदेखि सुरु हुने जाम छिचोल्न घन्टौँ लाग्छ। धूलो र घन्टौँको जामले निसासिएका प्रत्येक यात्रु सरकारलाई गाली गर्छन्। तर, झिँगाको सरापले डिँगा के मथ्र्यो ?
Source : http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=6676